Ikhaya » Izindaba Zamuva » Okuthunyelwe izivakashi » I-Detox Yasekhaya Yotshwala Umlutha
Akungabazeki ukuthi kuyadingeka ukunqoba umlutha owonakalisa impilo futhi uqede zonke izinhlelo. Kodwa-ke, kwesinye isikhathi, kunzima kakhulu ukuba semtholampilo nabantu ongabazi kude nomndeni nomoya wasekhaya. Ngenhlanhla, kunohlelo lokuvuselela, oluhlanganisa amandla osizo lomndeni nosizo lochwepheshe.
Ekulweni nokulutha, i-home detox kungenzeka kwabaningi.
Lokhu kwenziwa ngenxa yezinhlelo zokukhipha utshwala emakhaya ezibandakanya ukwelashwa okunqunyiwe kanye nokubonisana ngocingo nochwepheshe basemtholampilo.
Ama-GP, abelaphi, nabahlengikazi, ayatholakala ku-24/7 ukunikeza ukuholwa, ukuthuthuka, izincomo, noma ukusekelwa okuthile.
Ukukhetha kwe ukukhipha utshwala ekhaya kungenzeka ngokuphelele ukulwa nomlutha wokugwema ukuwa empilweni yomphakathi.
Okukhethekile kohlelo lwe-Home Detox
Kuyadingeka ukuthi kucatshangelwe ukuthi ukuvuselelwa kwasekhaya akufanelekile kuzo zonke iziguli. Ngaphambi kokuqala kokuvuselelwa, ongoti kufanele benze inhlolovo, bahlole ukuhlaziywa, futhi bahlole isimo sisonke.
Kungaleso sikhathi kuphela, uma ochwepheshe bengachazi ukuthi umlutha ungathí sina, kungenzeka ukuthi unikeze ubuthi emzimbeni.
Omunye wemitholampilo yokuvuselela kabusha e-UK Serenity ( https://www.rehabclinic.org.uk/locations/drug-alcohol-rehab-clinic-london/ ) inikeza zombili izinhlobo zokuvuselelwa kotshwala - iziguli ezingalali neziguli (i-home detox).
Izikhungo ze-Serenity Addiction ziphethe uhlelo lokukhipha utshwala ekhaya, okubandakanya ukuthatha imithi enqunyiwe kanye nokuxhumana ngocingo nochwepheshe basemtholampilo.
Ungacabangi ukuthi ekhaya, isiguli sihlala sodwa. Ochwepheshe beSerenity, njengama-GPs, abelaphi, nabahlengikazi, bayatholakala ku-24/7 ukunikeza ukuholwa, ukuthuthuka, ukuncoma, noma ukusekelwa okuthile. Ngaphezu kwalokho, balawula zonke izigaba zohlelo futhi balandele inqubekela phambili.
Kungani Kufanele Ukhethe Uhlelo Lweziguli Lwabagulayo
Izinzuzo zokuvuselelwa kwe-Serenity home detox:
Ukubonisana ngocingo nezikhathi zokwelashwa
Izinhlelo zokudla okunomsoco nezokudla
Ukufinyelela ezifundweni eziphambili zabachwepheshe bezidakamizwa ezingcono kakhulu zotshwala
Izidakamizwa ukuphatha izimpawu zokuhoxa
Ngaphezu kwalokho, cabanga ukuthi ukuvuselelwa kwekhaya kushibhile kunokwelashwa kweziguli.
Vele, ubuthi emzimbeni busho izinga eliphakeme kakhulu lokuzimela nomthwalo wesiguli. Uma kukhona ukungabaza ngonembeza wakho, kunengqondo ukuqala ngokuvuselelwa kweziguli bese kancane kancane udlulela ekwelashweni okukude.